စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသို့လူမှုကွန်ယက်များမဟောခြင်းကိုရပ်ပါ Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 3, 2009 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
လူမှုမီဒီယာကိုအာရုံစိုက်တဲ့နေရာမှာဒေသတွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာကိုလေးစားတဲ့လူအတော်များများရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကတချို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလူမှုကွန်ယက်တခုတည်းမှာပဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အကြံပေးခြင်းအားဖြင့်မှားယွင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကို ဦး ဆောင်နေတယ်ဆိုတာငါတကယ်ယုံတယ်။
မင်းသိတဲ့အတိုင်းငါလူမှုကွန်ယက်တွေ၊ လူမှုမီဒီယာဝက်ဘ်ဆိုက်တွေ၊ ငါပိုင်ကွန်ရက်များ၌ကောင်းမွန်သောနောက်လိုက်တစ်ခုရှိသည်။ မေးခွန်းကတော့ကျွန်ုပ်ဘလော့ဂ်ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ခဲ့တယ် ကြေးဇူးတငျစကား သူတို့အားလူမှုရေးကွန်ယက်ရန်။ ပြီးနောက်မှာ၊ သူတို့ဟာယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးမိတ်ဆွေတွေပါ။ သူတို့ကအသွားအလာအမြောက်အများအတွက်အကောင့်သင့်တယ်, ဟုတ်သလော
ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်ကိုသွားတဲ့နောက်ဆုံး 143,579 ည့်သည် ၁၄၃,၅၇၉ ကိုကြည့်ရအောင်။
ဂူဂဲလ် - ၁၁၇,၆၀၇ ထူးခြားသော visitors ည့်သည်များ
StumbleUpon: ၁၆,၈၄၀ ထူးခြားသော visitors ည့်သည်များ
Yahoo!: ၄,၂၃၆ ထူးခြားသော visitors ည့်သည်များ
တွစ်တာ - ၂,၂၂၉ ထူးခြားသော visitors ည့်သည်များ
Live: ၆၀၅ ထူးခြားသော visitors ည့်သည်များ
MSN - unique ည့်သည် ၅၅၉ ယောက်
မေး - ထူးခြားတဲ့ 476 ည့်သည် ၄၇၆ ယောက်
AOL: 446 ည့်သည် ၄၄၆ ယောက်
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် - 275 ထူးခြားသော visitors ည့်သည်များ
LinkedIn: 93 ထူးခြားသော visitors ည့်သည်များ
Baidu: unique ည့်သည် ၇၉ ယောက်
Altavista: ၅၄ ထူးခြားသော visitors ည့်သည်များ
Plaxo: unique ည့်သည် ၄၁ ယောက်
Netscape: ၃၉ ထူးခြားတဲ့ visitors ည့်သည်
ငါလူအပေါင်းတို့ကိုနားထောငျဖို့ဖြစ်လျှင် Smippies များငါတနေ့လုံး update လုပ်ဖြုန်းချင်ပါတယ် Facebook က နှင့် LinkedIn တို့ တစ် ဦး ခေါအောင်ကြိုးစားရန်။ ငါမကျင့်ဘူး
ထိုလူမှုကွန်ယက်များသို့ပို့စ်များနှင့်အသစ်ပြောင်းခြင်းများကိုကျွန်ုပ်အလိုအလျောက်ပြုလုပ်သော်လည်း၎င်းတို့ကိုအလုပ်လုပ်ရန်အချိန်မပေးပါ။ အကြောင်းရင်း ၂ ခုရှိတယ်။
သူတို့က ပြီးပြီ ယုံကြည်စိတ်ချရသောကွန်ယက် သူတို့ကိုငါတွန်းလှန်ရောင်းဖို့မလိုဘူး - သူတို့ကငါ့အတွက်ရောက်နေပြီ။
သူတို့၏ ဒီလူမှုရေးနတ်ဝင်သည်များမှတဆင့်ငါနှင့်အတူချိတ်ဆက်ရန်ရည်ရွယ်ချက် ငါ့ထံမှဝယ်ရန်မဟုတ်, သူတို့ငါ့ကိုရောင်းဖို့မျှော်လင့်ထားကြဘူး။ တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ဒီရှေးရှေးတွေနဲ့ငါ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုမချိုးဖျက်ဘူး။
အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့နေရာမှာဆက်ဆံရေးအသစ်တွေဆက်လုပ်ဖို့ငါဆက်လုပ်မယ်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်မှတဆင့်။ ဒီဘလော့ဂ်မှာငါပေးတဲ့အဖြေတွေကိုရှာနေတဲ့လူတွေကငါသိတယ်။ ဒါကြောင့်ငါအဲဒီမေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေကိုလိုက်ပြီးငါ့ရဲ့နောက်လိုက်ကိုကြီးထွားစေဖို့အာရုံစိုက်တော့မယ်။ ခွင့်ပြုချက်ကိုအခြေခံပါတယ် ကြီးမားသော (ကျွန်ုပ်၏ကွန်ယက်မှ ၀.၂% အသွားအလာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက) နှင့်သူတို့၏ ရည်ရွယ်ချက် ငါပေးတဲ့အဖြေတွေကိုရှာဖွေဖို့ဖြစ်တယ်။
မဟုတ်ဘူး! လူမှုရေးကွန်ရက်တွေ၊ သင့်ကိုသူတို့သုံးဖို့တွန်းအားပေးတဲ့သူတွေကိုလျစ်လျူရှုဖို့သင့်ကိုငါအကြံမပေးပါဘူး။ ငါအကြံပေးသည်မှာသင်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏ရလဒ်များကိုတိုင်းတာ။ သင်၏နည်းဗျူဟာများကိုသင့်လျော်စွာချိန်ညှိခြင်းဖြစ်သည်။ Smippies များလွန်းခြင်းသည်ရလဒ်များကိုတိုင်းတာရန်နှင့်သင်၏နည်းဗျူဟာများကို ဦး စား ပေး၍ သင့်အားကူညီရန်အတွက်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိဘဲလူမှုကွန်ယက်များ၏အကျိုးကျေးဇူးများကို ev ၀ ံဂေလိတရားဟောကြားရန်ထွက်နေသည်။
ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်ကိုသက်သေပြရန်ထိုအတိုင်ပင်ခံများကိုစိန်ခေါ်ပါ။ ငါမှာအမြတ်အစွန်းမဟုတ်သောကျွမ်းကျင်သူများကပြောကြားခဲ့သည် ခေါင်းဆောင်မှု Ventures ဒီကနေ့အမှန်တရား - စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့ငါဒေါ်လာဆိုင်းဘုတ်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုတိုင်းတာတယ်။ ငါသာစျေးကွက်ရှာဖွေနေလျှင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ရောင်းအားဝယ်ယူမှုဒေါ်လာကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊
4:2009 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 6, 54
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များနှင့်အခြားသူများအကြားသမုဒ္ဒရာကွာဟမှုကြောင့်သင်၌ထိုနေရာတွင်ကြီးမားသောအချက်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ သို့သော် segment တစ်ခုစီ၏ပြောင်းလဲခြင်းအချိုးကိုရှာဖွေနိုင်လျှင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလိမ့်မည်။ အလတ်စားတစ်ခုစီ၏သက်တောင့်သက်သာရှိသော visitors ည့်သည်များကိုစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။
4:2009 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 12, 49 တွင်
လုံးဝ! ထို့ကြောင့်ဂရုတစိုက်တိုင်းတာရန်ထောက်ခံချက် - ဒေါ်လာဖြင့်တိုင်းတာပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် goacom!
4:2009 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 6, 41 တွင်
အာမင် !! ငါလုံးဝသဘောတူတယ် လူမှုမီဒီယာမှမည်သည့်အရာကိုမဆိုမဖယ်ရှားသော်လည်းသင်၏အသွားအလာသည်သဘာဝမှမည်သည့်နေရာမှလာသည်ကိုသင်နားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်သည်အချို့သောလူမှုမီဒီယာဆိုဒ်များ (ဥပမာ Stumbleupon) မှအသွားအလာရသည့်တိုင်ထို visitors ည့်သည်များ၏တန်ဖိုးနှင့်ရည်ရွယ်ချက်ကိုတိုင်းတာရမည်။
4:2009 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 11, 28 တွင်
ငါနဲ့မင်းကို ၁၀၀% သဘောတူတယ် ဘလော့ဂ်ရေးခြင်းတွင်ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည်ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်စေရန်ယုတ္တိတန်သောနည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုမည်ဆိုပါကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြန်လည်ရရှိရမည်။ Smippies များလွန်းခြင်းမှာဘလော့ဂ်များကို Holy Grail အဖြစ်ရောင်းချခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်ကုမ္ပဏီများအားဘလော့ဂ်အားမည်သို့ဗျူဟာမြောက်မည်သို့ချထားရမည်နှင့်မည်သို့တိုင်းတာသည်ကိုမသင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသူက PPC ဟုတ်မဟုတ်အော်ဂဲနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ search box ထဲမှာတိုက်ရိုက်ရေးထားတာဖြစ်လို့ပဲ။
6:2009 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 1, 05 တွင်
လူမှုကွန်ယက်များအတွင်း၌ပင်ယင်းကိုသင်လုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းနှင့်အချက်အလက်များကိုဝက်ဘ်ဆိုက်များစွာသို့တင်ပြီး twitter ကကျွန်ုပ်တို့အားအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးအသွားအလာကိုပေးနေသည်။ ၎င်းသည်စုစုပေါင်းနံပါတ်များတွင်ဒုတိယနေရာတွင်ရှိသော်လည်းအချိန်ကုန်ခံရခြင်းနှင့်စာမျက်နှာများကိုကြည့်ရှုခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်ဒီအစုအဝေးအတွင်းမှာငါတို့ twitter ဟာငါတို့နဲ့ထိတွေ့မှုရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်အောင်သေချာအောင်လုပ်ဖို့အာရုံစိုက်နေတယ်။
6:2009 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 9, 04 တွင်
တွစ်တာကသင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုရှာဖွေခြင်းထက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပိုယူလာသလား။ ထိုသို့ဖြစ်ခဲ့လျှင်၎င်းသည်အလွန်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းလိမ့်မည်! သို့မဟုတ်ပါကသင် SEO SEO အကူအညီရယူရန်သို့မဟုတ်စတင်ရန်အချိန်ရောက်ပြီဟုဆိုလိုနိုင်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဘလော့ဂ်!
6:2009 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 3, 43 တွင်
ကျွန်ုပ်သည် PR ၌ပါ ၀ င်ပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့အချိန်၌ SM အကြံပေးခြင်း / ဟောကြားခြင်းများစွာကိုပြုလုပ်နေသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအားဤအစပျိုးမှုအသစ်များသည်အပြည့်အဝပေါင်းစည်းထားသောဖြေရှင်းချက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရန်အမြဲသတိပြုရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အများစုသည်ဒီဂျစ်တယ်ရှုခင်းကိုမြေပုံဆွဲရန်နှင့်လူမှုကွန်ယက်များသို့ကောင်းသောအကြောင်းအရာများကိုဘာသာပြန်ရန်သာလိုအပ်သည်။ ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာတော့ဒေါ်လာပြန်လာပြီးတန်ဖိုးကိုပြသရမယ်။ ဂူဂဲလ်သည်သင်၏“ ပင်မစာမျက်နှာ” ဖြစ်သည်နှင့်သင်ရင်းမြစ်ကို ဦး စားပေးဂရုပြုရမည်ဟူသောအချက်ကိုသင်အလေးအနက်ထားသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် (ps ငါ Twitter မှတဆင့်ချိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ဟေ့)
6:2009 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 9, 08 တွင်
ကောင်းတယ် Twitter မှတစ်ဆင့်သင့်ကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ် - ကျွန်ုပ်သည် Twitter မှရက်များအတွင်းကျွန်ုပ်၏အသွားအလာ ၈% အထိရတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါတန်ဖိုးထားသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Search မှ ၅၀% + သာရရှိသောကြောင့်ထိုတွင်ကျွန်တော်အနည်းငယ်အာရုံစိုက်မိသည်။ Twitter ကျွန်ုပ်၏ feed ကို Twitter မှအလိုအလျောက်ပေးသည် twitterfeed ဒါကြောင့်မဆိုအားထုတ်မှုမလိုအပ်ပါဘူးဒါကြောင့်!
16:2009 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 10, 31
ဂရိတ် post ကို Doug ။ သင် (ကျွန်ုပ်တို့၏ထင်မြင်ချက်အရ) စျေးကွက်ရှာဖွေမှုအထိခိုက်မခံဆုံးနေရာ - တိုင်းတာခြင်းကိုနှိပ်ပါ။ လူအများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်သူ၏ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ကျရှုံးခဲ့ပြီးပညာတတ်ဆုံးဖြတ်ချက်များမချခြင်း၊ သူတို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ် / လှုပ်ရှားမှုများအားပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းများမပြုလုပ်ကြပါ။ ငါ့ကိုမမှားပါစေနှင့်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်အလွန်ကောင်းသည့်ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းကိုအခြားကြားခံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မည်မျှကြိုးစားအားထုတ်ရမည်ကိုသင်ဓမ္မဓိevaluate္ဌာန်ကျကျအကဲဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်။